Naqshadeynta E-mailka: 6 Astaamood Oo U Baahan Dib U Fakir | Martech Zone
Waxay kuxirantahay qofka aad weydiiso, emaylku wuxuu jiray inta udhaxeysa 30 ilaa 40 sano. Qiimaheeda waa iska cadahay, iyadoo codsiyada ku baahsan dhinacyada bulshada iyo xirfada nolosha labadaba. Waxa kale oo u muuqda, si kastaba ha noqotee, waa sida tikniyoolajiyadda e-maylka ee waqtigeedu dhacay ay runti tahay. Siyaabo badan, emaylka ayaa dib loogu habaynayaa inuu ahaado mid ku habboon baahiyaha sii kordhaya ee isticmaalayaasha maanta.
Laakiin intee jeer ayaad ku yareyn kartaa wax ka hor intaadan qirin in laga yaabo in waqtigiisii ​​la soo dhaafay? Markii aad bilowdo inaad baarto khaladaadka e-maylka oo aad aqoonsato meelaha horumarka laga sameynayo, waxaad bilaabeysaa inaad ogaato sida 'e-maylka' 2.0 'uu u kala duwanaan lahaa haddii la dhisi lahaa lana bilaabi lahaa maanta. Waa maxay astaamaha lagu dari doono ama la hagaajin doono? Maxaase laga hari lahaa? Naqshadeynta cusubi maku amaahin doontaa codsiyada kale?
Haddii aan dib u cusbooneysiin lahayn e-maylka maanta, halkan waxaa ah lix aasaas oo u adeegi lahaa barta cusub ee e-maylka. Ma aqaano adiga, laakiin haddii aan adeegsan karo nidaamkan, waxaan noqon lahaa mid kaamil ah oo kaamil ah per
Ma jiro cinwaanno emayl oo dheeri ah
Sanduuqayaga sanduuqa ayaa gabi ahaanba cakiran. Dhab ahaantii, sida laga soo xigtay Kooxda Radicati, 84% e-maylka la helay maanta waa spam. Sababtoo ah tani way fududahay: cinwaanada emaylku way furan yihiin. Dhammaan qof kastaa wuxuu u baahan yahay cinwaanka emailkaaga iyo 'voila' - waxay ku jiraan sanduuqaaga. E-mailka 2.0, waxaa jiri lahaa nidaam oggolaansho ku saleysan oo leh hal aqoonsi oo keliya. Aqoonsigani wuxuu ahaan doonaa mid gaar ah sida lambarka moobiilka qofka.
Santuuqa halaga baxo
Marka aan helno 'aqoonsiga' iyo habka oggolaanshaha ee loogu talagalay isticmaaleyaasha saxda ah, waan ka takhalusi karnaa sanduuqa. Yep, sanduuqa E-mailka 2.0 ayaa sifiican ugu adeegi doona ganacsiyada iyo macaamiisha labadaba haddii 'wada hadal' kasta ama farriin kasta oo dhambaal ah ay hareer marto 'qabashada dhammaan' nooc baaldi ah, aka sanduuqa. Biibiile toos ah oo dhexmara meheradda iyo xubnaheeda dhagaystayaasha ah waxay noqon doontaa horumar si weyn loo soo dhoweeyay.
Dabeecadda furan ee cinwaanada emayllada iyo xayiraadda spam ayaa sidoo kale ka dhigan inaan la qabsannay fayrasyada, isku dayga phishing, iyo khiyaanooyinka. Iyadoo aan daacadnimo jirin, wax kasta oo 'dib loo soo celin karo' waa mamnuuc. Marka, emaylka 2.0, waxaan rabnaa inaan awoodno inaan biilalka bixinno, saxiixno dukumiintiyo sir ah isla markaana aan ku wareejinno hantida aqooneed. Tani waxay dhici kartaa oo keliya haddii kanaal aamin ah oo si buuxda loo duubay la furay inta u dhexeysa soo diraha iyo qaataha si markaa loo hubiyo diidmo la'aan.
Xiriirka waqtiga dhabta ah ee lala xisaabtamo
Markaad dirto farriin email, maxaa ku dhacaya? Ma waxbaa la daadiyay, miyaa lagu qabtay miiraha spam, ma la akhriyaa, miyaa la iska indhatiray? Runtu waxay tahay; ma ogid E-maylka 2.0, laxisaabtanka iyo warbixinta waxay noqon doonaan hore iyo dhexe. Sida badan sida qoraalka farriinta u shaqeyso, emaylkeena mustaqbalka wuxuu noqon doonaa mid ku saleysan farriin iyo dhiirigelinta waqtiga dhabta ah, isdhexgalka tooska ah. Had iyo jeer shid oo had iyo jeer wax ku ool ah.
Kobaca degdega ah ee mobiladu wuxuu soo jeedinayaa inay tahay waqtigii loogu talagalay barxad loogu talagalay oo keliya iyada oo maskaxda lagu hayo isticmaalka moobiilka. Noloshu waxay u socotaa si ka dhakhso badan sidii ay ku dhaqaaqday 30 sano ka hor, intaasna waxaa ku lumaya emayllo dhaadheer iyo sawirro HTML ah oo qurxoon oo aan ujeedo lahayn. Dadku waxay doorbidaan inay la xiriiraan iyagoo adeegsanaya ereyo kooban, badiyaa iyagoo adeegsanaya madal lagu sheekeysto. Marka e-maylka 2.0 waa inuu hubiyaa xiriir wanaagsan; gaaban, waqti ku habboon oo loogu talagalay in lagu akhriyo taleefanka gacanta iyada oo aan loo eegin meesha uu ku haysto adduunka.
In kasta oo tani ay tixraaci karto wax badan oo nolosheena ah, tixraacan gaarka ah ayaa ah faylasha ku lifaaqan e-maylka loo soo diray waddadayada. Celcelis ahaan Mareykanku wuxuu qaataa qiyaastii lix daqiiqo maalintii isagoo raadinaya lifaaqyo iyo feylal. Taasi waxay u tarjumaysaa saddex maalmood oo wax soo saar lumay sanadkiiba. E-maylka 2.0 shaki kuma jiro inuu fahmi doono lifaaqyada aan helayno oo aan u maamuli doono si waafaqsan. Kan ku xeree halkaas, kan kalena halkan u dhaqaaji. Calan midkan lacag bixinta iwm.
Tags: emailcinwaanada emailfariinta emailkanaqshadeynta emaylkadhaqdhaqaaqa emaylka
Richard Smullen waa agaasimaha guud ee Python-ka. Wuxuu horey u soo noqday wada-aasaase iyo agaasime ka tirsan shirkadda 'Genesis Media LLC', oo ah jiil soosocda oo warbaahinno kaladuwan ah, oo ah barxadda xayeysiinta fiidiyowga ee waqtiga dhabta ah.
Sida Loo Cabiro Guusha Baraha Bulshada
Qof Kasta Wuxuu Neceb yahay Xayeysiinta Ad Xayeysiinta Lacagta La Siinayo Wali Shaqeyneyso?